↑ Singh, M. (2020). "Macaca mulatta". IUCN Red List of Threatened Species 2020. IUCN. doi:10.2305/IUCN.UK.2020-2.RLTS.T12554A17950825.en.
↑ Groves၊ C.P. (2005)။ "Species Macaca mulatta"။ in Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M. (eds.)။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းကျမ်း (တတိယအကြိမ် ed.)။ Baltimore: ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ် ပုံနှိပ်တိုက်။ p. 163။ OCLC 62265494။ ISBN 0-801-88221-4။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မျောက်စပ်&oldid=743309" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ မေ ၂၀၂၂၊ ၀၅:၄၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။